Nairobi:-Waxaa Akhristayaasha Halgan.net ee sharafta leh u soo gudbinayanaa Khudbo Jimcihii uu Allaha dhowree uu ka akhriyey Masjidka Abuubakar ee magaalada Nairobi Sheekh Maxamed Cabdi Umal Sheekh Umal ayaa waxaa uu ka hadlay wanaaga iyo fadliga salaada Jimacaha iyo axkaamteeda.
Waa qeybtii Labaad ee uu Sheekh Umal uga hadlayo wanaaga iyo ajarka salaada jimcaha Sheekhu uu soo arooriyey Axaadiista iyo Aayaadka Quraanka ee ku soo arooray fadliga salaada Jimacaha iyo Ahmiyada ay leedahay .
Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayaa waxaa uu bulshada Soomaaliyeed uga digay in ay yareystaan Salaada Jimcaha wuxuuna ugu baaqay si guud in loo ilaaliyo Salaada iyo dhamaan wax uu alle na faray iyo Rasuulkiisa Maxamed nabadgalyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayaa jimaca walba ka hadla mowduuc Muhiim ah oo ay umada ku dhaqan magaalada Nairobi ay si weyn uga faa,ideystaan.
Halgan.net ayaa dhawaan idiin soo gudbin doonta dhawaan Khudbo jimcihii maanta ee Masjidka Abuubakar ee magaalada Nairobi
One comment on “Khudbadii Jimacaha ee Maanta Sh Maxamed Cabdi Umal Xafidahulaah (Dhageyso)”
cabdullaahi on April 27, 2012 at 9:22 pm said:
allaahu akber allaahu akber allaahu akber
mashaa allaah shekhunaaa